Soomaalidu Waa Birlab Aan Jabin | Dunida24.com
14ki Octobar waxaa dhacay musiibo nagu dhacdo tii ugu weynayd. Maahan kaliya tirada dadka ku dhintay badnaanteeda waxa qalbiga na gubay ee sidoo kale qiimaha iyo tayada dad ka naga dhintay sarraynteeda ayaa ah mid aan laga gam’i karin. Waxaan is iri ma xulkii ummaddeena ayaa meesha la isugu geeyay mise Soomaali oo dhan ayaan kala dhicin. Dareenkaygu wuxuu i siinayaa inay jawaabtu tahay midda danbe.
Allaha u raxmadee Sheekh Cabdisalaam waxaa ku dhashay dhul-daaqsimeedka loo yaqaan Diir-haro ee gobalka Gedo qiyaasti 1930-ki. Waqitiga uu dhashay sheekhu Gedo waxay u badnayd dhul miyi ah Baardheere iyo Luuq kaliya ayaana magaalo kaga yaalay. Sidaas oo ay tahay sheekhu wuxuu indhaha ku kala qaaday barashada diinta Islaamka. Arintaas waxaa sabab u ahaa inuu sheekhu ka dhashay reer diimeed oo waqti walba ay joogaan ku dadaalo inay ubadkooda baraan diinta islaamka. Sida darteed barashada Qur’aanka wuxuu ka bilaabay dugsigii qoyskooda u oodnaa.
Marki uu kuray xoog le ah noqday ayuu u xaraysay Baardheere iyo tuulooyinka u dhow ee gobalka Baay ka tirsan. Halkaas ayuu Sheekhu ku xafiday Qur’aanka. Sidoo kale wuxuu soo bartay tafsiirka iyo fiqhiga Shaafiga oo uu ilaa Minhaajka daraaseeyay. Ka dib, wuxuu dib ugu noqday deegaanki uu ka yimid oo uu ka billaabay barida diinta kuna guursaday.
ibrahim Aden shireVISIT PROFILE
Amarkan boqorka ee lacagaha gunnooyinka lagu siinayo shaqaalaha dawladda ayaa yimid maalmo ka dib markii dawladdu...